ANDRIMPANJAKANA: Fantaro ny momba ny Antenimierandoholona – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:19
Andrasana ny fandrafetana ny birao maharitra.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/ANDRIMPANJAKANA: Fantaro ny momba ny Antenimierandoholona
Andrimpanjakana anisany voaresaka matetika tato anatin’ny volana vitsivitsy izay ny Antenimierandoholona. Isika rahateo miditra amin’ny fotoana fifidianana ireo izay handrafitra ity Andrimpanjakana ity amin’izao fotoana. Rariny, noho izany, raha hitondrana fanazavana bebe kokoa mahakasika azy.
Lucien R. 9 décembre 2020
Ny efitrano fivorian’ny Loholona.
Anisany andrimpanjakana eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny Antenimierandoholona, araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-40-n’ny Lalàmpanorenana. “Loholon’i Madagasikara” na senatera no anarana entin’ireo mpikambana ao amin’ny Antenimierandoholona. Ity farany izay misolo tena ireo Vondrom-bahoaka Itsinjarampahefana sy ireo vondron-draharaha ara-toekarena ary ara-tsosialy. Etsy ankilany,”ny Antenimierandoholona dia ahitana, ho an’ny roa ampahatelony, mpikambana voafidy mitovy isa ho an’ny Faritany tsirairay, ny iray ampahatelony dia mpikambana tendren’ny Filohan’ny Repoblika, ny ampahany araka ny fanolorana ataon’ny vondrona izay mahasolo-tena be indrindra avy amin’ny hery ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ara-kolontsaina, ny ampahany noho ny fahaizana manokana”, araka ny voalaza ao amin’ny Lalàmpanorenana ao amin’ny andininy faha-81.
Loholona 18 manomboka izao
63 teo aloha no isan’ny Loholon’i Madagasikara nandrafitra ny Antenimierandoholona. Noho ny politika vaovao napetraky ny Fitondram-panjakana mba hampiasana bebe kokoa ny volam-panjakana any amin’ny asa tena miantraika mivantana amin’ny vahoaka, nisafidy ny hampihena ny isan’ny Loholona ho 18 ny Fanjakana. Noho izany, arak’io andininy faha-81 io, solontena roa isaky ny faritany enina eto amintsika sisa no ho fidiana rahafakampitso, izany hoe, senatera 12. Ny enina ambiny kosa dia tendren’ny Filohan’ny Repoblika. Tsara ho fantatra fa dimy taona no fe-potoana iasan’ny senatera, afa-tsy amin’izay mikasika ny Filohan’ny Antenimierandoholona, ho fampiharana ny andininy faha-46 andalana faharoa momba fisahanana ny anjara raharahan’ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fotoana hilatsahan’ity farany amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, araka ny andininy faha-80.
Manaramaso ny eny anivon’ny Kaominina ny Senatera.
Araka ny andininy faha-82, lalàna fehizoro no mamaritra ny fitsipika momba ny fampandehanandraharaha sy ny firafitry ny Antenimierandoholona. Torak’izany koa ny fomba fifidianana sy fanendrena ny mpikambana ao aminy. Ankoatra izay, maka ny hevitry ny Antenimierandoholona ny Governemanta momba ny raharaha ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ny fandaminana ny Vondrom-bahoaka Itsinjarampahefana, araka izay voalaza ao amin’ny andininy faha-83.
Mamaritra ny fotoam-pivorian’ny Loholon’I Madagasikara kosa ny voalaza ao amin’ny andininy 84. Voalaza ao fa mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierandoholona. Enimpolo andro no faharetan’ny fotoam-pivoriana. Izany dia manomboka ny talata voalohany amin’ny volana mey ny fotoam-pivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin’ny volana oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana. Afaka manao fotoam-pivoriana manokana ihany koa izy araka ny fiantsoana ataon’ny Governemanta. Ny lahadinika amin’izany dia ferana amin’ny alàlan’ny didim-panjakana fiantsoana izay noraisana teo amin’ny Filankevitry ny Minisitra. Rehefa tsy mivory ny Antenimierampirenena, ny Antenimierandoholona dia tsy afaka mandinika afa-tsy ny raharaha nangatahin’ny Governemanta ny heviny, afa-tsy izay volavolan-dalàna.
Tsara ho fantatra fa ao anaty fotoam-pivoriana ara-potoana tanteraka ny eo anivon’ny Antenimierandoholona ankehitriny. Fotoana izay tokony hifantohana indrindra amin’ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2021. Misy ihany koa anefa ireo volavolan-dalàna sy tolo-dalàna hafa dinihina eny amin’ny Lapa Maitson’Anosikely.
Misahana ny andraikitry ny Filohan’ny Repoblika
Araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-46, andalana faharoa, ny Filohan’ny Repoblika amperin’asa izay milatsaka hofidina amin’ny fifidianana ho Filohan’ny Repoblika dia mametra-pialàna amin’ny toerany enimpolo andro alohan’ny hanatanterahana ny fifidianana Filohan’ny Repoblika. Amin’io anton-javatra io, ny Filohan’ny Antenimierandoholona no misahana ny anjara raharahan’ny Filohan’ny Repoblika andavanandro mandra-panolorana ny fahefana amin’ny Filoha vaovao.
SENATORIALY RAHAFAKAMPITSO: Feno ny fepetra hirosoana amin’ny fifidianana
Roa andro mialohan’ny fifidianana Loholon’i Madagasikara, efa saika tomombana avokoa ny fanomanana rehetra karakarain’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Tsiahivina fa nanatanteraka fivoriambe ny teo anivon’ny Ceni, afakomaly. Fotoana izay nanaovana tombana ny firoson’ny fanomanana amin’ny fifidianana Loholon’I Madagasikara amin’ny zoma izao. Araka ny fanazavana, noho izany, efa tonga eny anivon’ny renivohitry ny Distrika avokoa amin’izao fotoana izao ireo bileta tokana sy ireo kojakoja rehetra ilaina amin’ny fifidianana, toy ny fitanana an-tsoratra, ny antontan-taratasy, fanisana ny vato. Efa niparitaka eny anivon’ny Faritra sy ny Faritany ihany koa ireo kaomiseran’ny Ceni hanaramaso ny fizotry ny fifidianana. Midika izany fa tsy misy ny fikatsoana tamin’ny fikarakarana ity fifidianana Loholona ity. Hatramin’ity andro faran’ny fampielezankevitra ity, tsikaritra ho samy efa manao ny ezaka rehetra handresena lahatra ireo mpifidy vaventy ireo mpilatsaka ho fidiana isam-paritany. Izany hoe, tsy misy ny olana. Tsara ho fantatra fa hifarana anio amin’ny sasakalina ny fampielezankevitra. Rahampitso kosa dia natao ho andro hahanginana na ilay antsoina hoe “silence électorale”.
Efa tomombana ny pitsopitsony ara-teknika rehetra (Sary Fanehoana)
Efa vonona ireo mpanara-maso
Hatramin’ny faran’ny herinandro teo, mpanara-maso ny fifidianana miisa 40 no nahazo fankatoavana teo anivon’ny Ceni. Misy amin’izy ireo no hahasahana ny birao fandatsaham-bato manerana ny Nosy. Misy kosa ireo izay mijanona amin’ny fari-pifidianana ary misy ny misafidy ny hanaramaso amin’ny birao fandatsaham-bato vitsivitsy, hoy ny fanazavana. Tetsy ankilany, anisany fepetra takiana amin’ireo lisitry ny kandida ny fanolorana anarana ho mpitam-bola amin’ny fampielezankevitra tamin’ny fifidianana Loholon’i Madagasikara amin’ny 11 Desambra izao. Hatramin’ny faran’ny herinandro, mbola lisitra fito amin’ny lisitra 14 no nanao izany, araka ny fanazavan’ny avy eo anivon’ny Ceni. Marihana fa eny anivon’ny Ceni ihany no hametrahana ny antontan-taratasy fanendrena ny ho mpitam-bolan’ny fampielezankevitra. Ankoatra izay, ny lisitra kandida dia afaka manendry solontena ho mpikambana ao amin’ilay « formation non permanente » ao amin’ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana. Izany hoe, ho mpikambana toy ny mpikambana ao amin’ny Ceni, miara-mivory amin’ny birao maharitry ny Ceni ao anatin’ny fivoriambe. Hatreto, lisitra kandida miisa sivy amin’ny 14 manerana ny Nosy no efa nanendry io solontena io.
Efa vonona ireo mpifidy vaventy
Tsy vitsy ireo mpifidy vaventy efa naneho fahavonona hifidy.
Tsy arakaraka ny savorovoro nisy tany am-piandohan’ny fanomanana ity fifidianana ity, vonona tanteraka ny ampahany betsaka amin’ireo mpifidy vaventy tokony hifidy amin’ity fifidianana Loholona ity handray anjara amin’ny latsabato. Raha tsiahivina, nisafidy ny tsy handray anjara tamin’ity fifidianana ity ny avy amin’ny fanoherana. Noresen’izy ireo lahatra mahakasika ny tsy tokony handatsahana vato amin’ny fifidianana ihany koa, araka izany, ireo mpifidy vaventy avy amin’ny fanoherana. Tsy izany anefa no zava-nisy fa nanao fanambarana mitokana ireo mpifidy vaventy tsy avy amin’ny antokon’ny Fanjakana fa handray anjara feno amin’ny fandatsaham-bato amin’ny zoma izao. Midika izany, tena isan-jato vitsy sisa ireo ben’ny tanàna sy mpanolotsaina tsy handatsabato. Salanisa izay tsy hampihen-danja ny fifidianana mihitsy, ary tsy hisy fiantraikany amin’ny maha ara-drariny ny fifidianana.
11 Desambra 2020 : Andro fiasana sy fianarana “
Natao andro hiasana sy hianarana tahaka ny andavanandro ihany ny andron’ny fifidianana Loholon’i Madagasikara ny 11 Desambra izao”, hoy ny mpampakatenin’ny Ceni, Fano Rakotondrazaka. Izany hoe, miasa avokoa ny mpiasa, mianatra avokoa ny mpianatra. Mizotra miaraka amin’ny asa andavanandro ihany koa ny fifidianana. Anisany fepetra noraisin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana rahateo, tamin’ity senatorialy ity ny tsy fanaovana ny birao fandatsaham-bato eny anivon’ireo toeram-pianarana sy sekoly. Araka izany, any amin’ny biraon’ny rantsamangaikan’ny Ceni, any amin’ny renivohitry ny Distrika irery ihany no misy ny birao fandatsaham-bato. “Ho an’izay biraon’ny rantsamangaikan’ny Ceni izay heverina fa tsy afaka mandray ny fifidianana no hitadiavana vahaolana hafa mba tsy hisian’ny fifanelingelenana eo amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina sy ny fanatanterahana ny fifidianana”, hoy hatrany ny fanazavana.
FAMETRAHANA NY FARITRA VATOVAVY: Haroso eny amin’ny parlemanta
FILOHAN’NY CAF, AHMAD: Naaton’ny Fifa mandritra ny 5 taona
TOERANA MAHA SOLOMBAVAMBAHOAKA : Araraotin’ny mpanohitra anaovana tatitra politika amboletra
HETSIKY NY MPANOHITRA: Handray fepetra manokana ny EMMO-FAR